Blog ရပ်ဝန်းမှ အလွဲလေးများ ( ၁ ) | Layma's World
Filed under: Analysis, That's what I wanna say |
« SHELTER Blog ရပ်ဝန်းမှ အလွဲလေးများ ( ၂ ) »
သားကြွက်, on June 15, 2008 at 11:44 pm said:
အဒေါ်ကြီင်္းကတော့နော် ပြောနေရဲ့သားနဲ့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြှီးး ဟားဟား သားကြွက်တို့ ကတော့ ဂလိုမျိုးပြစ်ချက်တွေကင်းတယ် အဲ့လိုမျိုးလုပ်မိရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေလို့ တက်မှမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက သူများကစားစရာ ခိုးမိတဲ့ ခလေးလိုဖြစ်မိနေမယ်ထင်တယ် ။ ရှင်းထားတာတွေ ကောင်းပါတယ် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ လည်းခံစားမိတယ် ။ စာရေးဆရာကြီးတွေ ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ စာကို ဖော်ပြမိရင်တော့ သွားရောက် ခွင့်တောင်းဖို့ ဆိုတာက ဖြစ်မှမဖြစ်နိူင်တာပဲ ဘလော့ဂါ အချင်းချင်းဆိုရင်တော့ ခွင့်တောင်းသင့်တယ် ဂိုဏ်ချုပ်ရေ့ Cheer ;;;; 😛
P>S= မောင်မျိုး(ရေတွင်းနစ်) ဆီက ယူသုံးလျှင် အလကားမရပါ လာထား ၅ ကျပ် ပ်ိုက်ချံစုနေတယ် မိန်းမတောင်းမလို့ဟီးးဟီးးး 🙂
foolbag (JKQA), on June 16, 2008 at 12:31 am said:
သိပ်ကောင်းတဲ့ တင်ပြချက်ဗျာ.. အခုတင်ပြတဲ့ပိုစ်လေးဟာ. တကယ်တော့ စာရေးသူတွေအားလုံးကို တန်ဖိုးရှိစေချင်တဲ့အတွေး.. စာရေးသူဟာလည်း အခု မလေးမပြောသလိုပဲ လိုက်နာသင့်တယ်.. ဒါမှသာ မိမိရဲ့ကလောင်သွေး ဘယ်အဆင့်ရောက်လဲဆိုတာ သိနိုင်မှာကပေါ့.. ဒီလိုတင်ပြချက်လေးဟာ အင်မတန်မှ လိုက်နာဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်.. လေးစားပါတယ် မလေးမ. အနုပညာဆိုတာကို တန်ဖိုးရှိစေချင်တဲ့ အသိစိတ်တစ်ခုနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမနာပဲ.. ပြောချင်တဲ့စကားကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ပြနိုင်တာ… ဘလော့ညီအကို မောင်နှမများအတွက် မှတ်သားစရာနဲ့.. အသေချာကို အလေးနက်ထားစရာပါ.. မိမိရေးတဲ့ပိုစ်တစ်ပုဒ်မဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့မှာတင်ပြိး မသိတဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားအပေါ်မှာ ပီတိဖြစ်တာထက်.. မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုစ်ကို ညံ့တယ်လို့ပြောခံရတာ တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ယူဆမိပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေဗျား.. ပြောလဲပြီးပါပြီ..
mtj, on June 16, 2008 at 8:59 am said:
စတိဖ်ဂျော့က ပြောဖူးတယ် လူတော်တွေကမှီငြမ်းတယ်။ ပိုတော်တဲ့လူတွေက ပေါ်တင်ခိုးချတယ် တဲ့ဗျ။
စိုးထက် - Soe Htet !, on June 16, 2008 at 11:03 am said:
ဟုတ်တယ် ညီမရေ … အဲ ဒီ ပြဿနာကတော့ …
ဟဲ ဟဲ … 🙂
Yan, on June 16, 2008 at 12:14 pm said:
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပဲ မလေးမ. ကျွန်တော် ဘလော့ဂါနီတိ အကြောင်းရေးတဲ့ အခါ ဒါလေးကို ထည့်ညွှန်းမယ်.
အိမ့်ချမ်းမြေ့, on June 16, 2008 at 12:21 pm said:
လေးမ ရေးထားတာလေး သိပ်ကောင်းပါတယ်…
သက်ဝေ, on June 16, 2008 at 12:24 pm said:
chaos, on June 16, 2008 at 12:41 pm said:
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခံစားချက်အမျိုးမျိုးပေါ် အခြေခံပီး ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် စာတစ်ပိုဒ်မှာ
ကိုယ့်ရဲ့ အရိပ်အယောင်တွေအများကြီးပါနေတတ်တာပဲလေ။ အဲ့လိုလှလှပပလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်စားမိတဲ့ စာတွေဖြစ်လာဖို့ ပေးဆပ်ရတာတွေလဲ ရှိမှာပဲ။ ကိုယ့်ရည်းစားက သူ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ ပညာသားပါပါ ဒေါသထိန်းဖို့ဆိုတာလဲ လိုအပ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ရင်ဆိုင်လာရတဲ့ အချိန်မှာ လုပ်နိုင်ပါ့မလားလို့ တွေးရင်း တွေးရင်း တွေးရင်း……..ကြိုးစားရဦးမယ် ချစ်မရေ ပြည့်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့…………………
ပန်ဒိုရာ, on June 16, 2008 at 9:29 pm said:
ဒါလေးတွေဟာ ဘယ်နေရာမှာရေးရေး စာရေးတဲ့လူတယောက်အဖို့ အခြေခံစောင့်ရမယ့် စည်းလေးတွေပါ။ ပြောပြမှ သိရကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့လည်း..။
nu-san, on June 16, 2008 at 9:44 pm said:
ဘလော့ခ်လောကမှာ အဲဒီပြသနာတွေက ရှေ့လျှောက်လည်း ရှိနေဦးမှာပဲ။ လေးမပြောသလို သိက္ခာရှိရှိဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တောင်းပန်တဲ့သူက တောင်းပန်လိုက်လို့ ကျေအေးလိုက်ရင်လည်း ပြသနာအားလုံးပြီးသွားမှာပဲ။ ဒါမှလည်း အားလုံး စိတ်ရှင်းရှင်းနေလို့ရတာပေါ့။
BLACK DREAM, on June 16, 2008 at 11:05 pm said:
ကောင်းတယ်ဗျ။ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေပဲ…။ ပြောမသွားရင်တောင်နေပါ အောက်မှာ ဘယ်သူရေးထားတာပါ ဆိုတာလောက်နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ 🙂
MhawSayar, on June 16, 2008 at 11:57 pm said:
သိပ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေပေါ့ဗျာ။ မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်သွားအောင် Delicious မှာ သိမ်းထားလိုက်ပြီ။
မျှဝေပေးတဲ့ မလေးမ ကို ကျေးဇူးပါ။ 🙂
ညိမ်းညို, on June 17, 2008 at 3:05 am said:
အရာရာကို အသင့်အတင့်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ အမကြီးရေ ၊ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေချည်းပါပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
မျှားပြာ, on June 17, 2008 at 6:18 am said:
လက်ဖက်ခြောက် နည်းနည်းလောက် 😛
စိုးထက် - Soe Htet !, on June 17, 2008 at 12:16 pm said:
ကိုစတန်လေဆီ မှာ ကျွန်တော့် အကြောင်း ပေါက်ကရ ရေးသွားတဲ့ လူက လင့်ခ် ကို ဒီလင့်ခ် ချန်သွားတယ် … ကိစ္စ မရှိပါဘူး ကျွန်တော် က သိပြီး သား တစ်ခြားလူတွေ အထင် မှားကြ မှာ စိုးလို့ လာပြောပြတာ …
အဆင်ပြေပါစေ ဗျို့ … ကျွန်တော် နားနေတယ် … တာ့ တာ ..
စိုးထက် - Soe Htet !, on June 17, 2008 at 12:18 pm said:
အညာသား, on June 18, 2008 at 5:32 am said:
မှန်ပါ့ မှန်ပါ့။ အစ်မရဲ့စေတနာကို လေးစားမိပါ၏။
soemoe, on June 18, 2008 at 6:42 am said:
ဟုတ်မမရေ..အဲဒီလိုအလွဲလေးတွေက…ငါ့ ရည်းစားက..သူ့ ရည်းစားဖြစ်နေတယ်..
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on June 18, 2008 at 11:54 am said:
=) . . . totally agree with u, sis!
lay-ma, on June 22, 2008 at 12:33 am said:
>သားကြွက် .. မိန်းမ ယူဖို့ပိုက်ဆံ စုနေတာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲ …။
>foolbag … ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမနာပဲ.. ပြောချင်တဲ့စကားကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ပြနိုင်တာ …လို့ရေးသွားတာ လေးမရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်သွားသလိုပါပဲ …။ မှန်တာကို ၀န်ခံရရင် ဒီပို့ စ်ကို မရဲတရဲနဲ့တင်လိုက်တာပါ .. ။ မှန်တိုင်းလဲ မကောင်းဘူးဆိုကြသကိုး…။
>ကိုသင်္ကြန် .. ကို အတာကြီးက ဘယ်လို လူလဲ … လူတော်ကြီးလို့ထင်တယ်..။
>ကိုစိုးထက် … ဟုတ်တယ် … ကိုစိုးထက်ရေ … အဲဒါကတော့ … အဲဒီလို … အဲဒါကြောင့် …။ လေးမ ကို အထင်လွဲကြမှာကို ပူပန် စိုးရိမ် စိတ်နဲ့လာသတိပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင် ..။ ရေးသူ လေးမ ဟုတ်မဟုတ်တော့ လေးမ ရှင်းစရာ မလို ဘူးထင်ပါတယ် …။ လေးမ ဘော်ဒါတွေထဲ မှာ မူလတန်းကလေး မပါဘူးလို့ ဘဲ ယူဆပါတယ်…။
>ကိုရန်အောင် … အသိအမှတ်ပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
>မလေး … အရှည်ကြီး ရေးထားတာဆို … လေးမ တွေ့ တာတော့ ဒီ တစ်ခုတည်း…။
>မသက်ဝေ … ကွန် မန့် ရေးဖို့ခက်တဲ့ လေးမ ဘလော့ဂ်မှာ ရအောင်ရေးပေးသွားတဲ့ မမသက်ရဲ့ စေတနာကို လေးမ … လေးစား ကျေးဇူးတင်လျက် …။
>chaos … ဒီလိုပါပဲ ညီမလေးရယ် … ပြည့်ဝဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ …။ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့အမျှ ရင့်ကျက်လာပါလိမ့်မယ်…။
>မပန် … ပြောပြမှ သိရကြတော့မယ် လို့ တော့လည်း မဟုတ်ကြပါဘူး …။
>မနုစံ …ဟုတ်တယ် … မရယ် ..။ စိတ်ရှင်းရင် နေလို့အကောင်းဆုံးပဲ …။
>အိပ်မက်နက် … အနက်ကြီး … ရဲ့ ကွန် မန့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..။
>မှော်ဆရာ … သိမ်းသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ …။ ရေးရတာ အားရှိသွားပြီ ..။
>ညိမ်းညို … ၄ ခုတောင်တွေ့ တယ်… ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ရယ်ပြနေတာ ပဲ ကွာလို့တစ်ခုပဲ တင်လိုက်တယ်နော်..။
>မျှားပြာ .. အတွေးတွေ ဆူပွက်သွားပုံရတယ်…။
>အညာသား … ထောက်ခံမဲ ပေးတာ ကျေးဇူးပါ အညာသား..။
>စိုးမိုးလေး … ညီမလေး နော် … မမကို မမြှောက်နဲ့ … မမ ခေါင်းဆောင့် သွားပြီ ..။
>ရွှန်းမီ … သဘောတူရင် လက်ခုပ်တီးပါ …။
ဝေလေး, on July 2, 2008 at 2:43 pm said:
lay-ma, on July 12, 2008 at 10:48 pm said:
ဝေလေး… ညီမရေ.. ဒီအလွဲလေးတွေ မှတ်သွားသလား.. ကျေးဇူးညီမရေ..။